Filoha Rajoelina Andry: « Averina amin’ny laoniny i Manjakamiadana… » | NewsMada
Filoha Rajoelina Andry: « Averina amin’ny laoniny i Manjakamiadana… »
Mizotra tsara ny asa fanarenana ny Rovan’Antananarivo. Tafiditra ao anatin’izany ny lapan’i Manjakamiadana. Hotazonina ny endriny… Hanara-penitra ny zavatra ho vita.
Tonga nitsidika ny fandrosoan’ny asa fanarenana an’i Manjakamiadana ny filoha Rajoelina Andry, omaly. Mazava ny toromarika nomeny fa : « tsy maintsy averina amin’ny laoniny tahaka ny endriny teo aloha i Manjakamiadana ary hovitaina mialohan’ny fankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena izany ». Notsiahiviny ihany koa fa « hisy ireo fanavaozana hafa tsy maintsy atao mba hampanaraham-penitra azy tahaka ny fahita amin’ireny trano fitahirizana vakoka any ivelany ireny ».
Raha ny hita teny an-toerana, efa vita avokoa ny asa vaventy amin’ny fanamboarana ny Rova amin’izao. Nosafidiana manokana ary natao nitovy tanteraka tamin’ny temitra tamin’izany ireo hapetaka ao amin’ny rihana voalohany misy ny efitra hampirantiana ireo vakoka. Araka ny efa nambaran’ny filoha Rajoelina Andry tamin’ny fanombohana ofisialy ny asa, hatokana ho toerana fanehoana an-tsary amin’ny alalan’ny “hologramme” ny tantaran’ireo Mpanjaka, ny rihana faharoa na ny antsoina hoe « salle des scénographies ». Hohajariana ho birao sy toerana famakiana boky sy tahiry kosa ny rihana fahatelo.
Notsinjovina manokana ihany koa ireo olona manana fahasembanana ka nametrahana “ascenseurs” ao anatin’ny lapa mba hanamorana ny fivezivezena ao anatiny. Hatsangana eo amin’ny tokotanin’ny Lapa ihany ny “Kianja Masoandro” izay hampiaina amin’ny alalan’ny tantara an-tsehatra ny tantaran’ireo mpanjaka nifandimby. « Ny fanarenana an’i Manjakamiadana dia hamerina indray ny hambompom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana ary hampahafantatra sy hamatotra antsika indray amin’ny tantara », hoy ny filoha Rajoelina Andry.